စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတွေကို လက်ဖဝါးပေါ်ကမျဉ်းကြောင်းတွေကနေသိနိုင်တဲ့အရာ - JAPO Japanese News
လာ 23 Nov 2020, 9:27 မနက်
ထိုကဲ့သို့သော အချစ်ရေးအတွက်လက္ခဏာကြည့်ရင် လက်ယာ? လက်ဝဲ? ဘယ်လက်ကိုကြည့်သင့်လည်းဆိုတာရယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ သင်ဟာ ဘယ်လိုချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်သဘောထားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားလဲဆိုတာ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။လက္ခဏာကြည့်တဲ့အခါအခြေခံတွေကတော့ “ စိတ်လှုပ်ရှားမှုလိုင်း” ၊ “ ဦးနှောက်လိုင်း” ၊ “ အသက်သွေးကြော” ဆိုပြီး အခြေခံမျဉ်းသုံးလိုင်းရှိပါတယ်။၎င်းတို့အနက် အခြေခံမျဉ်းသုံးလိုင်း၏ထိပ်ဆုံးမှာရှိ တဲ့မျဉ်းက စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြတဲ့မျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤစိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအတာဖြင့် သင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်၌စိတ်အားထက်သန်မှုရှိတာကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်။ထို့အပြင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစိတ်ခံစားမှုမျဉ်း၏ထောင့်ပေါ်မူတည်ပြီးမြင်နိုင်သည်ဟုလည်းဆိုထားပါတယ်။လက္ခဏာကြည့်သည့်အခါ သီအိုရီအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း လက်ျာလက်ကပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ဝဲလက်သည်မူလကံကြမ္မာဖြစ်သည်ဟုဆိုထားပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကတော့ ဗေဒင်ဟောသူအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောကြောင့် မည်သူကိုယုံကြည်ရမလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုမျဉ်းရဲ့အရှည်နဲ့စကြပါစို့။လက်ဖြင့်မြင်နိုင်သောအချစ်
ပျမ်းမျှထက်ပိုရှည်တယ်ပျမ်းမျှစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမျဉ်းများထက်ပိုရှည်သောသူများကတော့ စိတ်အေးအေးထားသည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများရှိပြီး အများစုက အချစ်နှင့် ပတ်သက်၍ နက်ရှိုင်းသောစိတ်နှင့်သတိရှိကြပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုများသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသောကြောင့် ၎င်းသည်ရေရှည်အချစ်အတွက်သင့်တော်ပုံရပါတယ်။အခြားသူတစ်ဦး၏ စိတ်ခံစားမှုမျဉ်းသည်ရှည်လျားပါက ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကို သေချာစွာတည်ဆောက်နိုင်ပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာကိစ္စတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်လည်း ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ဒေါသထွက်ခဲသော်လည်း၊ တစ်ခါဒေါသထွက်မိပြီဆိုရင်လည်း တော်တော်လေး စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ပျမ်းမျှစိတ်ခံစားချက်ထက်တိုတောင်းသောသူများသည် အချစ်နဲ့ပတ်သတ်လာရင်တော့ စိတ်တိုလွယ်ပြီး အချစ်ကိုစိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ ပူလောင်တဲ့အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ပြီး စိတ်မရှည်တဲ့ထဲမှာပါတဲ့သူတွေပေါ့။‌‌ဒေါသထွက်လွယ် စိတ်တိုလွယ်တဲ့လူတွေက ဒေါသထွက်တတ်ကြလို့မကောင်းဘူးလို့ထင်ကြပေမယ့် သူတို့မှာဒေါသကမရှည်ဘူး၊အကြာကြီးရှိမနေပါဘူး။ လတ်တလောမှာပဲ မေ့သွားတတ်တဲ့အတွက် လန်းဆန်းတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိပါတယ်။လက်ဖြင့်သိနိုင်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသဘောထား
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလိုင်းများမြင့်တက်နေသောသူများသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာအလွယ်တကူလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းချစ်တတ်သူတွေပေါ့။ သူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါသော အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဖြောင့်သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလိုင်းများရှိသူများသည် စိတ်ခံစားမှုအတက်အကျမရှိသောကြောင့် သီးသန့်ကမ္ဘာမှာနေသလိုမျိုးခံစားချက်ရှိတဲ့သူများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အများအားဖြင့်ခံစားလွယ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့။
သူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုလျှော့ချတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့အလုပ်နဲ့ဝါသနာကို ဦး စားပေးချင်တဲ့သူတွေပေါ့။ အခြားချစ်ခြင်းမေတ္တာ “ Postponement Line” တွင်လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစိတ်မဝင်စားတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။မျဉ်းရဲ့ အရှည်နှင့်ထောင့်သည် လူတစ်ဦး၏မေတ္တာရေးရာကိုကိုယ်စားပြုသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ခံစားမှုမျဉ်းနှင့်အတူတူပင်ခံစားမှုတူသူများသည် အချစ်ဇာတ်လမ်းများဆင်တူကြပြီး ၎င်းတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သဟဇာတဖြစ်သည်ဟုဆိုကြပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်ဂရုစိုက်သောသူများ၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလိုင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းရေးရာအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လက်ဖြင့်ကံကောင်းခြင်းကိုသင်မြင်နိုင်ရင်‌တော့ လက်ထပ်ခွင့်ကိုလက်လွတ်မခံစေချင်ပါ။လက်ဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကြည့်သောအခါ လက်မလွတ်သင့်သည့်နောက်ထပ်အချက်မှာအိမ်ထောင်ရေးလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဆိုသည်မှာ အစောပိုင်းကသင်တွေ့ခဲ့ရသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုင်းနှင့်လက်ချောင်းလေးများကြားရှိမျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏လက်ဝဲနှင့်လက်ယာလက်တွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်မျဉ်းအရေအတွက်များရှိပါတယ်။အချို့သောဗေဒင်ဆရာများက လက်ဝဲဘက်ရှိလက်ထပ်ခြင်းမျဉ်းသည်“ အခြားသူတစ် ဦး လက်ထပ်ရန်အချိန်” နှင့်လက်ျာလက်သည်“ သူသို့မဟုတ်သူမလက်ထပ်လိုသည့်အချိန်” ကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုထင်ရပုံရပါတယ်။ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်လက်ထပ်ခြင်းမျဉ်းကိုကြည့်သောအခါသင့်ရဲ့လက်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။သင်၏လက်ဝဲနှင့်လက်ယာလက်များနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုမျဉ်းတစ်ခုတည်းရှိပါကကံကြမ္မာရှိသည်ဟု အထူးအားဖြင့်ရှိသည်ဟုဆိုကြပါတယ်။လက်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်သဘောထား
③ – သင့်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာတွေ့ကြုံမှုရှိသလား။
ဒါဟာပျမ်းမျှအားဖြင့်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုမကြာခဏရှိပုံရပါတယ်။သင့်တွင်4ကြောင်း (သို့) ထိုထက်မကရှိလျှင်သင်၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ သင်လက်ထပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်ဟုလည်း သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။စကားမစပ် အများစုက လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုင်းများအရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီး “ သူတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြိမ်အရေအတွက်” ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပေမယ့် မှားနေပါတယ်။အရေးကြီးသည့်အချက်မှာတော့ ၎င်းသည်အိမ်ထောင်ရေးသက်တမ်းအရှည်ဆုံးနှင့် အခိုင်အမာဆုံးထင်ဟပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးကာလအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် “ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း” သို့မဟုတ်“ ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်ခြင်း” ဟုမဆိုလိုပါဘူး။လက္ခဏာဆိုတာက အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် လက်ထပ်ခြင်းလိုင်းမရှိလျှင်ပင်စိတ်ပူစရာမလိူပါဘူး။လက်ဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသဘောထား။
④: လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၊ နောက်အိမ်ထောင်ပြုခြင်း
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အခွင့်အလမ်းမည်သည့်အချိန်တွင် လက်ထပ်ခြင်း၏အနေအထားကသင့်အားပြောပြသည်ဟုဆိုလိုပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုမျဉ်း၏အလယ်နှင့်လက်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုမျဉ်းကြောင်းဆွဲပါ။ ၎င်းသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားတာဆိုလျှင် ၎င်းသည်အစောပိုင်းအိမ်ထောင်ရေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဆိုပါက ၎င်းကိုနောက်ကျသောအိမ်ထောင်အမျိုးအစားများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောသီအိုရီများရှိသော်လည်းအလယ်ကမျဉ်းကတော့ အသက် ၃၀ ခန့်ကိုဆိုလို့ပါတယ်။ လက်ချောင်းငယ်မှနှင့်မျဉ်းနီးလေ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနောက်ကျလေးလို့ဆိုလိုတာပါ။လက်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသဘောထား
⑤ – လက်ထပ်ရန်သင်ဆန္ဒရှိပါသလား?
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုင်းကဲ့သို့ပင်လက်ထပ်ခြင်းကလည်း သင့်လက်ပေါ်ရှိမျဉ်းကြောင်း၏ထောင့်တွင်လက်ထပ်ရန်ဆန္ဒရှိမရှိကိုကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုသည် ရှည်လွန်းတာ သို့မဟုတ် အထက်သို့တက်လျှင်သင်လက်ထပ်ရန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လက်ထပ်မှုမျဉ်းသည် အောက်ဘက်သို့ကျဆင်းသွားပါကလူ အများစုကလက်ထပ်ရန်တွန့်ဆုတ်နေပြီး“ ငါလက်မထပ်နိုင်တော့ပါ” ဟုပြောခြင်းကိုလည်းလက်မခံကြဟုဆိုနိုင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့လက်များမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျဉ်းမရှိလျှင်ပင် သင့်ရဲ့ကံကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။
အချို့လူများကစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမျဉ်းကြောင်းသို့မဟုတ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုလိုင်းကိုတွေ့သောအခါ သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့လိုင်းမရှိဘူးဆိုပြီး ညည်းတွားမြည်တမ်းကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
လက္ခဏာShuhei Shimada ရဲ့ပြောကြားချက်အရ “ ကံကောင်းတဲ့သူတွေမှာ ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တွေဟာ “ မိမိတို့ဟာကံကောင်းသည်ဟုအခိုင်အမာယုံကြည်သောသူများ” နှင့် “ ကောင်းမွန်စွာပြုမူနေထိုင်သူများ” ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကံမကောင်းလို့ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွေးနေတဲ့သူတွေကတော့ ကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရရင်တောင် နောက်ပိုင်းမှာမကောင်းတာဖြစ်မှာကို ကြိုတွေးပြီး လက်လျှော့လိုက်တဲ့သူတွေလည်းများပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ မိမိဟာကံကောင်းသည်ဟုထင်မြင်သူများက သူတို့၏လုပ်ရပ်များကိုယုံကြည်နိုင်ပြီး ရှေ့သို့တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။
“ ကံ” ရဲ့ ကလောင်အမည်ကိုအသုံးပြုသောအခါ “ သယ်ဆောင်ပါ” ဟူသောစကားလုံးကိုသုံးကြပါတယ်။ကံကောင်းတာက နေရာတစ်နေရာတည်းမှာရှိနေရင်တောင်မှ အလွယ်တကူမရောက်နိုင်ပါဘူး။ သင်ကိုယ်တိုင်ကနေမှ နေရာအမျိုးမျိုးသို့သွားပြီး နေရာအနှံ့အပြားတွင်အခွင့်အလမ်းကိုအသုံးချမှ ကံတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤအချိန်မှာရှာဖွေကြည့်လိုက်လို့သင်လိုချင်တဲ့လက္ခဏာကိုသင်ရှာမတွေ့လျှင်ပင် အခွင့်အလမ်းကိုအသုံးချပြီး အရှုံးမပေးဘဲ ဆက်လက်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကြိုးစားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကံဟာလည်းမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။
Dolce & Gabbana ရေမွှေးကိုကြိုက်ပါသလား ?!!!